Soy Sauce Fekitori - China Soy Sauce Vagadziri uye Vanotengesa
DaoDao rakasviba soya mchero
Zita Sechigadzirwa: Daodao Rima Soy Sauce Inoshandiswa kugadzira uye kutumira nehupfumi, zvishoma inotapira, uye shoma munyu munyu. Zvinongedzo: mvura, yakasviba soya bhinzi, girazi, caramel, munyu, monosodium glutamate, xanthan gamu, sodium benzoate. Amino acid nitrogen (zvinoenderana naitrogen) ≥ 0.40g / 100ml Hunhu: Chechitatu giredhi Nzvimbo munzvimbo ine shady uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Shefu yehupenyu: mwedzi makumi maviri neshanu Rondedzero: 500mL * 12 pa carton 1500 makatoni pane 20'FCL Nutrition Information servings pane imwe pepa: Appro ...
Yakajekeswa Chiedza Soy Sauce
Zita rezvigadzirwa: 180 Rakanatswa Chiedza Soy Sauce Zvinongedzo: mvura, defatted soya, gorosi, caramel, munyu, monosodium glutamate, doro rinodyiwa, ini + G, sucralose. Amino acid nitrogen (zvinoenderana naitrogen) ≥ 1.20g / 100ml Hunhu: yakakosha giredhi Nzvimbo munzvimbo ine shady uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Shelf hupenyu: mwedzi makumi maviri nembiri Rondedzero: 500mL * 12 pa carton 1500 makatoni pa 20'FCL Nutrition Information servings pane imwe pasuru: Approx.33 Kushumira ukuru: 15mL NRV% Energy 65kJ 1% Protein 1.8 ...
Yakagadziriswa Rima Soy Sauce
Zita rezvigadzirwa: 180 Yakanatswa Kwakasviba Soy Sauce Zvinongedzo: mvura, yakasvibiswa soya, gorosi, caramel, munyu, monosodium glutamate, inodhakwa doro. Amino acid nitrogen (zvinoenderana naitrojeni) ≥ 0.70g / 100ml Hunhu: yekutanga giredhi Nzvimbo munzvimbo ine shady uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Shelf hupenyu: mwedzi makumi maviri nembiri Rondedzero: 500mL * 12 pa carton 1500 makatoni pane 20'FCL Nutrition Information servings pane pachest: Approx.33 Kubatira saizi: 15mL NRV% Energy 95kJ 1% Protein 1.2g 2% Fat ...
Deredza Munyu weSoy Sauce
Chigadzirwa zita: 180 Deredza Munyu Soy Sauce Iyo inocherwa neisina-GMO soya uye yakakwirira-yegorosi gorosi kwemazuva anopfuura zana negumi. Iyo ine 30% isingasviki munyu pane yedu yepakutanga yakabikwa Premium Soy Sauce. Zvishongedzo: mvura, yakasviba soya, gorosi, munyu, chena granized shuga, edoro doro, monosodium glutamate, mbiriso kuburitsa, lactic acid, vhiniga, I + G Amino acid nitrogen (maererano nitrogen) ≥ 0.70g / 100ml Hunhu: yekutanga giredhi munzvimbo ine shady uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Hupenyu hwesherufu: mwedzi makumi maviri neshanu Ruzivo: ...
Chigadzirwa zita: 180 yepakutanga yakabikwa premium soy mchero Inoibvunzwa isiri-GMO soya uye yakakwirira-yakakodzwa gorosi kweanopfuura mazuva 180. Iyo yakasununguka kubva kune zvinowedzera zvekudya zvakadai sedziviriro, zvinowedzera flavor, zvinotapira, uye neruvara rwemavara. Iyo ine kuravira kunonaka kuravira uye yakasarudzika tsvuku-ruvara ruvara. Zvinoshandiswa: Mvura, yakasviba soya, gorosi, munyu. Amino acid nitrogen (zvinoenderana naitrogen) ≥ 0.90g / 100ml Hunhu: yakakosha giredhi Nzvimbo munzvimbo ine shady uye yakaoma yakaiswa chisimbiso. Hupenyu hwesherufu: mwedzi makumi maviri neshanu Ma ...